5 Arrimood Oo Uu Necebyahay Qofka Jaceyl Hayo - Daryeel Magazine
5 Arrimood Oo Uu Necebyahay Qofka Jaceyl Hayo
Dadka arrimaha jacaylka ka faalooda ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo qofka jacaylku ku dhacay neceb yahay isla markaana aanu cidii kula talisa ka qaadan, lagana yaabo inuu nacayb u qaado.
Shan arrimood oo lagu soo ururiyay ayaa waxa ka mid ah. In qofku cida uu jecel yahay ee ay kaga dhegan tahay dhaliilo laga sheego, waxaanu cid kasta oo uu hadalo ama ficilo noocaas ah ka maqlo uu u qaadaa colaad.
Waxa kale oo uu qofka jacaylku hayaa neceb yahay, dhex galka dadka oo wuxuu noqdaa mid bulshada ka go’ xaaladan ayaa la sheegaa inay tahay mid qofku ku jeclaysanayo inuu wakhti badan kaga fikiro ruuxa uu jecel yahay waxaanay ku keentaa inuu gooni joog noqdo, sidoo kale wuxuu karaahiyaystaa sheekada badan ee uu bulshada la yeelan lahaa.
Arrinta saddexaad ayaa ah inuu aad u hiifo hawlaha loo diro xilliyada uu rajaynayo in qofka uu jecel yahay laga yaabo inay is arki karaan. Arrimaha kale ee uu ka xumaado qofka jacaylku hayo waxa ka mid ah, dhibaato ku timaada meelaha uu xidhiidhka kala sameeyo cida uu jantay sida telefoonada, internet-ka ama xidhiidhka boosaha haddii uu isticmaalo. Marka uu joogo meel uu ku sugayo cida rajadiisu ku xidhan tahay ma aqbali karo in wax arrin ah ama hawl ahi la soo gudboonaato, sidoo kale wuxuu qofku nacaa shaqada badan, wax dhigashada badan iyo hurdada badan intaba.
Cuntadu ma noqoto mid uu qofku jeclaysto cunisteeda oo amateed xumo ayuu dareemaa haddii lagu celceliyana wuu necbaystaa. Dhinaca talada waalidka iyo dadka ka waaweyn uma arko xal wuxuuna dareema cadaadis badan, waxyaabaha jacaylkiisu ka dalbado cid kasta oo uu isagu uga sii baahdo kama ogolaan karo xitaa dib u dhac inuu ku yimaado. Waxaan maqli jiray uun nimay meeli u cadahay meeli ka madow.
Sida Qof Jaceyl Loogu Abuuro 6 Arrimood Oo Ay Tahay Inaad Ka Fogaato Hurdada Ka Hor!!! Xikmado Jaceyl Oo Qiimo Badan Talooyin Kaa Caawinaya In Battery-ga Laptop-kaaga In Mudo Ah Ku Hayo